दीपालाई दीपकले भने,‘तिमी मलाई जेल पठाउने कुरा नगर’ किन भने यसो हेर्नुहोस भिडियो... - Everest Media News
Home अन्तरबार्ता दीपालाई दीपकले भने,‘तिमी मलाई जेल पठाउने कुरा नगर’ किन भने यसो हेर्नुहोस भिडियो…
काठमाडौं – दीपाश्री निरौलाको निर्देशन रहेको सिनेमा छक्का पञ्जा–३ का दुईवटा गीत सार्वजनिक भैसकेका छन् । सिनेमाको ट्रेलर भने निर्माण पक्षले सिनेमा प्रदर्शनमा आउनु भन्दा केही दिन अगाडि मात्रै गर्ने बुझिएको छ ।
सार्वजनिक सिनेमाको पहिलो गीतले त युट्यूबमा छोटो समयमा एक करोड भन्दा धेरै पटक हेरिने गीतको रेकर्ड कायम गरेको छ । यहि खुशीमा निर्माण पक्षले केक पनि काटिसकेको छ ।
यो गीतलाई सार्वजनिक भएको ३७ दिनमै एक करोड भन्दा धेरै पटक हेरिएको हो । यस अघि यो रेकर्ड सिनेमा दुई रुपैयाँको कुटुमा कुटुले राखेको थियो ।
यो गीतलाई ४७ दिनमा एक करोड भन्दा धेरै पटक हेरिएको थियो । सोमबार मात्रै छक्का पञ्जा ३ मा समावेश दोस्रो गीत पछि उमेर ढल्किन्छ सार्वजनिक भएको छ । सिनेमाको दोस्रो गीत सार्वजनिक भएसँगै सिनेमाको प्रचारमा तिव्रता देखिएको छ ।
दीपक र दीपालाई हामीले पहिलो नम्बर लाई एक करोड पटक हेरिएको खुशीमा गरिएको सेलिब्रेशनमा फेला पारयौँ र केही कुराकानी पनि गर्यौँ ।
कुराकानीको क्रममा दीपक र दीपाले आफूहरुको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरे ।
उनीहरुले एकले अर्कालाई दिएको साथको खुलेर प्रशंसा पनि गरे ।
उनीहरुको सम्बन्धको चर्चा नेपाली सिने बजारमा हुने गर्दछ । रेडियो नेपालको राम विलास र धनियाँबाट सुरु भएको उनीहरुको जोडी तितो सत्यमा पनि एक साथ देखियो ।
टेलिसिरियलमा एक साथ देखिएपछि उनीहरुलाई धेरैे वास्तविक जीवनकै श्रीमान् श्रीमती भन्ने ठाने । हुन त दीपा र दीपकले आफूहरु प्रेममा रहेको कुरा कहिल्यै लुकाएका छैनन् । दीपाले त आफू दीपकसँग विवाह गर्न तयार भएको बताउँदै आएकी छिन् ।
दीपाका केही शुभ चिन्तकहरुले पनि उनलाई दीपकसँग विवाह गर्न सुझाव दिन्छन् । दीपाले हामीसँगको कुराकानीमा पनि दीपककै अगाडि आफू विवाहको लागि तयार भएको बताउँदै दीपकलाई तिमी तयार छौ ? भनेर प्रश्न गरिन् । यसको जवाफमा दीपकले भने, देशमा भर्खरै मुलुकी ऐन बनेको छ मलाई जेल पठाउने कुरा नगर्नु न ।
दीपकले यसो भन्दा दीपा भने मुस्काइन् ।
६ दिनमा ‘रामकहानी’ को कलेक्सन कति ? पढ्नुहोस पुरा….
आकाश र अदिती मोडल हन्ट….